Hitanay tanteraka ny sanda amin'ny marika ankapobeny, mpitari-marika, ary sary famantarana miaraka aminy. Mety ho fampiasam-bola lehibe izany, saingy ireo orinasa nanao ny fampiasam-bola dia nahita ny vokany. Indraindray ianao tsy afaka mividy izany tsotra izao, kanefa azonay! Raha mila sary famantarana fotsiny ianao, amin'ny tena marina dia misy loharano mahagaga eto.
Indraindray fantatrao izay tadiavinao, fa tsy manan-talenta fotsiny hitondra ny sarinao napkin amin'ny sary famantarana matihanina.
Logotypers - Ampidino ny sarisary (sary iray amin'ny telefaonao, rakitra PowerPoint, na sary ao amin'ny Paint) dia hovainay ho logo lehibe ao anatin'ny ora maromaro.
The NetMen - Volavola manomboka amin'ny $ 149.
Blog-omotives - avy amin'ny mpanolo-tsaina marika Jeff Fisher
Ny Logo ho an'ny DK New Media
Ohatra tsara amin'ny zavatra tsy manam-paharoa sy tsy hay hadinoina (araka ny hevitro). Nanao zavatra maromaro ilay mpanakanto:
Nampiasa zoro tsy mahazatra amin'ny lafiny roa amin'ny sary izy mba hanehoana fa tsy nanao zavatra matetika aho.
Tags: sary famantarana mahatalanjonaorinasa mpamorona logo tsara indrindrafamolavolana logo amin'ny Internet tsara indrindraserivisy famolavolana logo amin'ny Internet tsara indrindramividy sary famantaranamividy sary famantaranafamolavolana logo mora vidy amin'ny Internetlogo mora vidy amin'ny Internetfamolavolana logo loharanom-baovaocrowddsourcefamolavolana logo an'ny vahoakasary famantarana olonafamolavolana logo maro befamolavolana logo an'ny vahoakafamantarana ny vahoakadepositphotosmamolava marikasary famantaranadesigncontestdesignevofamolavolana logo Internetmamorona fotsinylisitry ny tranokala logoLogologo fahasambaranabilaogin'ny sary famantaranafamerenan'ny orinasa mpamorona sary famantaranafifaninanana famolavolana logosary infographicaingam-panahy logotranokala logofanadihadiana logosary famantarana ny sary famantaranalogoloungelogopondLogoshevitra logo momba ny marketingmedia bistroaiza no hividianana sary famantarana
Douglas - Misaotra nampiditra anay tamin'ny lisinao.
FYI dia vao avy nanangana endrika 'fifangaroana olona hybrid' vaovao, izay ahafahan'ny mpanjifa manasa sy mandoa mpamorona manokana handefasana amin'ny fifaninanana famolavolana - jereo ny famoahana gazety anay androany: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Ny hevi-dehibe dia midika izany fa mahazo fandoavam-bola azo antoka ireo mpamorona na inona na inona raha voafantina ny endriny. Ny crowdsourcing dia tsy voatery ho mpandresy dia mandray ny rehetra na, raha ny filazanao azy, "tsy tsara ho an'ny mpamorona"! Raha liana hanao tafatafa amin'ny tenako ianao na hanao tetik'asa fandinihana tranga amin'ny alàlan'ny DesignCrowd dia mifandraisa amin'ny alalàn'ny http://twitter.com/designcrowd 😉
Ireto koa misy loharanom-pahalalana fango vitsivitsy eto amin'ny tranonkalantsika.
7 Jun 2010 amin'ny 9:28 AM
Na dia deraiko aza ny fahaizanao manao “famolavolana logo” an'i Google, hitako ho tsy mampaninona ny fiparitahana sy ny fankalazana ny famolavolana logo mora vidy. Ireo tranonkala natolotrao dia manolotra kisarisary manjelanjelatra fotsiny (mitovy amin'ny "anaranao eto"), tsy misy eritreritra stratejika na inona na inona.
Ny fanosehana ireo tranokala famantarana ny besinimaro - ary eo am-pamoahana torohevitra momba ny fahazoana sary famantarana “original” - dia ihomehezana raha tsy mitandrina kely.
Marina ny anao amin'ny teboka iray: mahazo izay aloanao ianao. Na izany aza, ny antenaiko ho an'ny mpamakinao dia ny hanao fahazotoana kely kokoa alohan'ny hanomezana ny sary famantarana azy ireo ho anisan'ny fifaninanana famolavolana.
7 Jun 2010 amin'ny 11:07 AM
Ankafizo ny fanehoan-kevitra (tena ataovy) ary azoko tsara fa ny maso ivoho miady amin'ny toerana misy marimaritra iraisana dia manaporofo ny lanjany. Tsy manana fisalasalana momba ny sandainao aho - nahita orinasa toa an'i Kristian Andersen naka orinasa tsy an-jatony tapitrisa dolara aho - ny sasany dia noho ny faneken'ny marika azy ireo.
Ny famolavolana logo dia iharan'ny fanafihana - tsy toy ny orinasan-tranonkala hafa amin'izao fotoana izao. Manana olona toa an'i Chris Anderson miantsoantso hoe “Malalaka!” Isika. Ireo tranonkala fampiantranoana horonantsary dia tsy afaka mifaninana amin'ny YouTube, ny orinasan'ny Analytics dia nitolona tamin'ny Google, ary ny rafitra CMS toa ny Squarespace mifaninana amin'ny WordPress.
Azoko atao ny mijoro ary miady hevitra amin'ny hoe "No Spec", saingy nampiasa ny sasany tamin'ireo serivisy ireo manokana aho ary nahazo valiny tena tsara tamin'izy ireo. Tsy takona afenina ny zava-misy fa raha tsy tianao izy ireo dia mitombo ny lazany. Ary ho an'ny orinasa iray voafatotra vola ary tsy mahazaka marika matihanina, maninona raha mitady logo mora vidy sy malama? Ho nanao tsy nisy zavatra hafa izy ireo.
Te-hanana anao hanao lahatsoratra amin'ny antony hisorohana ny sasany amin'ireo / maro amin'ireo serivisy ireo aho!
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), notarihin'ny ex-AOL ex Warkh, izay tantanan'i Peter LaMotte, dia manana fahaiza-manao amin'ny fivezivezena kilasy manerantany ho an'ny logo sy filàna famoronana hafa.
2 Nov 2010 amin'ny 4:25 maraina
Vao avy nanangana tranokala fifaninanana famolavolana logo vaovao izahay: http://www.logoarena.com
Oct 10, 2011 amin'ny 6: 10 AM
Azafady esory ny marvellogodesign amin'ny lisitrao satria FRAUD. Jereo http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp: //www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Oct 10, 2011 amin'ny 8: 16 AM
Misaotra, Michaël! Nesoriko tamin'ny lisitra izy ireo ary nanampy an'i Creattica.
30 Nov 2011 tamin'ny 3:43 PM
Vao haingana aho no nanao sary famantarana miaraka amin'i http://www.logotypers.com Nalain'izy ireo ny sary nataoko ary novainy ho logo matihanina amin'ny $ 10 fotsiny (fa tsy maintsy mampakatra sarisary ianao, na ppt na zavatra hitarika azy ireo)
Hevitra mahafinaritra tokoa izany! Nanampy Logotypers ho an'ny faritra misy azy manokana aho. Misaotra!
Ny loharanom-pahalalana rehetra amin'ny fizarana sary famantarana dia mahasoa sy mahavariana miaraka amin'ny fampisehoana famoronana. Zavatra lehibe zarain'ny anao. Ankasitrahana indrindra ary mahatsiaro feno fankasitrahana amin'ny fizarana malalany.
Tiako ity lisitra ity. Ny zava-misy manolotra safidy isan-karazany ho an'ny olona sy ny rohy ianao, vita tsara… mpiambina io!
Oct 17, 2015 amin'ny 1: 34 AM
omg, tsara izany
28 Jun 2016 amin'ny 9:25 AM
Ny sary famantarana dia sary fitaratra amin'ny marikao. Mahagaga ny fomba fahitanao ny famoronana sary famantarana.
Eny, ny sary famantarana an'i Nike dia mitentina 35 $ amin'ny voalohany, nefa izao dia mitentina 600,000 XNUMX $ mahery. Ny famolavolana sary famantarana tsara fotsiny dia tsy afaka manampy anao hampitombo ny orinasanao. Ny serivisinao sy ny vokatrao dia tsy maintsy aseho koa ny tanjaky ny sary famantaranao.
Oct 4, 2017 amin'ny 6: 02 AM
Izaho dia nitady hevitra momba ny Logo Design tamin'ny fanaovana logo tsy manam-paharoa ary nahita ny hafatrao. Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Misy hevitra tsara ampiharina ao amin'ny tetikasako vaovao.
Misaotra amin'ny toro-hevitra sarobidy omenao
Lahatsoratra mahafinaritra momba ny famolavolana logo. Azo antoka fa nahazo aingam-panahy be tamin'ny lahatsoratra vaovao aho. Misaotra taonina iray ho an'ity Doug, mirary xmas ity!
7 Jan 2020 amin'ny 4:08 PM
29 Jun 2021 amin'ny 9:49 AM
Loharano famolavolana logo vitsivitsy izay azo antoka hanome aingam-panahy